Tech Tips: eSIM ဆိုတာဘာလဲ? | MyTech Myanmar
Tech Tips: eSIM ဆိုတာဘာလဲ?
eSIM ဆိုတာ Virtual SIM လို့ခေါ်တဲ့ အတုအယောင် SIM ကဒ်ပါ။ Physical SIM လို အပြင်ကသပ်သပ်ထည့်စရာမလိုပဲ eSIM Support လုပ်တဲ့ ဖုန်းတွေ၊ Smartwatch တွေနဲ့ တစ်ခြား ပစ္စည်းတွေမှာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ eSIM အသုံးပြုဖို့အတွက် Mobile Operator တွေနဲ့ ဖုန်းထုတ်လုပ်သူတွေဟာ သက်ဆိုင်ရာ Device တွေစထုတ်ကတည်းက ညှိထားရမှာပါ။ ဥပမာ- Huawei ကနေ eSIM Support လုပ်တဲ့ ဖုန်းတစ်လုံးကိုမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ထုတ်တော့မယ်ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံကရှိသမျှ Operator တွေအကုန်လုံးနဲ့ သဘောတူညီမှုရထားမှ အဆိုပါ Operator တွေအကုန်လုံးရဲ့ eSIM ကိုအသုံးပြုနိုင်မှာပါ။
eSIM ရဲ့ အားသာချက်တွေကတော့ Physical SIM Card တွေထည့်စရာမလိုတော့တဲ့ အတွက် အလုပ်ရှုပ်သက်သာစေပါတယ်။ Connection Speed ကိုလည်းပိုမြန်စေပြီး Smartphone ထုတ်လုပ်သူတွေနဲ့ Mobile Operator တွေပူးပေါင်းပြုလုပ်ထားလို့ အရင်လို SIM Card မကိုက်တာမျိုးမရှိတော့ပါဘူး။ Network တွေကိုအဆင့်မြှင့်တင်တဲ့ အခါမျိုးတွေမှာလည်း SIM Card သွားလဲစရာမလိုတော့ လို့အရမ်းအဆင်ပြေပါတယ်။ ကြိုက်တဲ့ Operator ကိုချက်ချင်းပြောင်းလဲနိုင်ပြီး အသုံးမပြုလိုတော့တဲ့ eSIM တွေကိုအ လွယ်တကူ Deactivate ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
အနာဂတ်မှာသာ eSIM တွေကပိုမိုတွင်ကျယ်လာပြီး Physical SIM တွေကိုမသုံးကြတော့တဲ့အခါ SIM Card Slot နေရာမှာ တစ်ခြားအစိတ်အပိုင်းတွေထပ်ထည့်လာနိုင်ပြီး ဖုန်းတွေရဲ့ အထူဟာလည်း ပိုပါးလာနိုင်ပါတယ်။ လောလောဆယ် eSIM Support ကို အသစ်ထွက် iPhone တွေနဲ့ တရုတ်ပြည်တွင်း Xiaomi ဖုန်းတစ်ချို့မှာ အသုံးပြုနေကြပါပြီ။ eSIM သီးသန့်ဖုန်းကတော့ လောလောဆယ် ထွက်ရှိလာမှာမဟုတ်သေးပဲ eSIM ရော Physical SIM ရော Support ပေးတဲ့ ဖုန်းတွေတော့ ထွက်ရှိလာတော့မှာပါ။
eSIM ဆိုတာ Virtual SIM လို့ချေါတဲ့ အတုအယောငျ SIM ကဒျပါ။ Physical SIM လို အပွငျကသပျသပျထညျ့စရာမလိုပဲ eSIM Support လုပျတဲ့ ဖုနျးတှေ၊ Smartwatch တှနေဲ့ တဈခွား ပစ်စညျးတှမှောအသုံးပွုနိုငျပါတယျ။ eSIM အသုံးပွုဖို့အတှကျ Mobile Operator တှနေဲ့ ဖုနျးထုတျလုပျသူတှဟော သကျဆိုငျရာ Device တှစေထုတျကတညျးက ညှိထားရမှာပါ။ ဥပမာ- Huawei ကနေ eSIM Support လုပျတဲ့ ဖုနျးတဈလုံးကိုမွနျမာနိုငျငံအတှကျထုတျတော့မယျဆိုရငျ မွနျမာနိုငျငံကရှိသမြှ Operator တှအေကုနျလုံးနဲ့ သဘောတူညီမှုရထားမှ အဆိုပါ Operator တှအေကုနျလုံးရဲ့ eSIM ကိုအသုံးပွုနိုငျမှာပါ။
eSIM ရဲ့ အားသာခကျြတှကေတော့ Physical SIM Card တှထေညျ့စရာမလိုတော့တဲ့ အတှကျ အလုပျရှုပျသကျသာစပေါတယျ။ Connection Speed ကိုလညျးပိုမွနျစပွေီး Smartphone ထုတျလုပျသူတှနေဲ့ Mobile Operator တှပေူးပေါငျးပွုလုပျထားလို့ အရငျလို SIM Card မကိုကျတာမြိုးမရှိတော့ပါဘူး။ Network တှကေိုအဆငျ့မွှငျ့တငျတဲ့ အခါမြိုးတှမှောလညျး SIM Card သှားလဲစရာမလိုတော့ လို့အရမျးအဆငျပွပေါတယျ။ ကွိုကျတဲ့ Operator ကိုခကျြခငျြးပွောငျးလဲနိုငျပွီး အသုံးမပွုလိုတော့တဲ့ eSIM တှကေိုအ လှယျတကူ Deactivate ပွုလုပျနိုငျပါတယျ။
အနာဂတျမှာသာ eSIM တှကေပိုမိုတှငျကယျြလာပွီး Physical SIM တှကေိုမသုံးကွတော့တဲ့အခါ SIM Card Slot နရောမှာ တဈခွားအစိတျအပိုငျးတှထေပျထညျ့လာနိုငျပွီး ဖုနျးတှရေဲ့ အထူဟာလညျး ပိုပါးလာနိုငျပါတယျ။ လောလောဆယျ eSIM Support ကို အသဈထှကျ iPhone တှနေဲ့ တရုတျပွညျတှငျး Xiaomi ဖုနျးတဈခြို့မှာ အသုံးပွုနကွေပါပွီ။ eSIM သီးသနျ့ဖုနျးကတော့ လောလောဆယျ ထှကျရှိလာမှာမဟုတျသေးပဲ eSIM ရော Physical SIM ရော Support ပေးတဲ့ ဖုနျးတှတေော့ ထှကျရှိလာတော့မှာပါ။
MyTech Myanmar2018-09-25T21:13:56+06:30September 25th, 2018|Mobile Phones, Science, Tips & Stories|